After you have openedafile and finished your business you need to close that file.
Don't keep an unnecessary open file on your server as it taking up resources and can cause mischief!
In PHP it is not system critical to close all your files after using them because the server will close all files after the PHP code finishes execution.
However the programmer?could make mistakes (i.e. editingafile that you accidentally forgot to close).
You should close all files after you have finished with them because it'sagood programming practice.
We will examine the?example below and discuss the importance of closingafile.
The function fclose requires the file handle that we want to close down.?
In our example above we set our variable "$fileHandle" equal to the file handle returned by the fopen function.
ဖိုင်တခု ကို ဖွင်၍ ဆောင်ရွက်ဖွယ် ရှိသည် တို့ကို ဆောင်ရွက် ပြီးပါက ထိုဖိုင်ကို ပြန်ပိတ် ရပါမည်။
အသုံးမလို တော့သည့် ဖိုင်များကို ဒီအတိုင်း ဖွင့်မထား သင့်ပါ။ သင့် computer ၏ memory တွင် နေရာယူ သည့်အပြင်၊ မှားရေးမိခြင်း၊ မှားဖျက်မိခြင်း တို့ ဖြစ်ပွား နိုင်ပါသည်။
ဖိုင္တခုကိုပိတ္ပံု (File Close Description)
PHP မသုံး တော့သော ဖိုင်များကို၊ မှတ်မှတ် ရရ လိုက်ပိတ်ရန် မလိုပါ။ မပိတ်မိ ပါကလည်း programming သဘော အရ ဘာမျှ မဖြစ်နိုင်ပါ။ PHP သည် တာဝန် ယူထား ရသည့် code များကို execute လုပ်ပြီး သည်နှင့်၊ ပိတ်သင့် ပိတ်ထိုက် သည်များ ကို ကောက်သင်းကောက် ပိတ်ပြီးမှ ရပ်ဆိုင်းပါသည်။
သို့သေါ်pogrammer များသည် မှားတတ် သည့် လူသား ဖြစ်၍၊ မှားပြီး edit လုပ်မိခြင်း၊ မှားပြီး deiete လုပ်မိခြင်း တို့ဖြစ် နိုင်ပါသည်။
သုံးပြီးသော ဖိုင်ကို ပြန်ပိတ် ခြင်းသည် pogrammer ကောင်းတို့၏ ကျင့်ဝတ် ဖြစ်ပါသည်။
အောက်ဖေါ်ပြပါ code တို့ကို လေ့လာ ကြည့်ပါ။
fclose function သည် file handle မရှိပဲ အလုပ် မလုပ်ပါ။
အထက် ဥပမာ တွင် fopen function မှ return လုပ်သော file handle ကို $fileHandle ဟုအမည် ပေးထားသော variable တွင် သိမ်းဆီး ထားခဲ့ပြီး၊ နောက်တစ်ကြောင်း ရှိ fclose function တွင် ထည့်သွင်း အသုံး ပြုထားပုံ ကိုမှတ် သားပါ။
ဖိုင္တစ္ခုကို fclose လုပ်ပြီး ပါက ထိုဖိုင်တွင် ရေးခြင်း၊ ဖတ်ခြင်း၊ ထပ်ဖြည့်ခြင်း လုပ်၍ မရ တော့ပါ။ ရေးခြင်း၊ ဖတ်ခြင်း၊ ထပ်ဖြည့်ခြင်း ထပ်မံ လုပ်လို ပါက၊ fopen function ကိုသုံးပြီး အစမှ ပြန်စရ ပါမည်။